Momba anay - Lockey Safety Products Co., Ltd.
Lockout no safidy raisinao, ny fiarovana no tanjon'ny Lockey.
Lockout no asan'i Lockey mandritra ny androm-piainany, tsy misy afa-tsy amin'ny asa aman-draharaha no manao lockout.
Manana ny departemantan'ny R&D izahay hanatanterahana ny endrika namboarina rehetra.
Ny vahaolana fiarovana dia tohana raha tsy fantatrao ny fomba fanatanterahana ny fomba fanidiana.
Ny famokarana fiarovana no fototra iankinan'ny fahombiazana ara-toekarena sy fampandrosoana maharitra. Ny ankamaroan'ny lozam-pifamoivoizana dia vokatry ny herisetra tsy ampoizina na manomboka amin'ny famoahana angovo tsy voafehy mandritra ny famokarana, fametrahana na fikojakojana.
Lockey dia mifikitra hatrany amin'ny filozofia iray izay tsy maintsyhidiana ny angovo mampidi-doza tsirairay. Mba hiarovana ny ain'ny mpiasa tsirairay manerantany amin'ny kalitaon'ny sinoa dia ny fanenjehana tsy misy tohiny an'i Lockey.
Lockey Safety Products Co., Ltd dia natsangana hiantohana ny fiarovana ny asa. Manana ny ekipa fitantanana kilasy voalohany izahay ary manana serials momba ny zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina, miaraka amin'ny ISO9001, OHSAS18001, ATEX ， CE sy SGS, manome vahaolana fiarovana amin'ny milina, sakafo, fananganana, lozisialy, simika, angovo ary indostrialy hafa rehetra. Ny elanelam-bokatra dia manarona lockout, ao anatin'izany ny padlock safety, lockout valves, lockout tariby, tag lockout, lockout hasp, fitantanana lockout station sns, miaraka amina tsena sy fanekena lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy eto an-toerana.
Lockey dia orinasa maoderina manambatra ny R&D, orinasa mpamokatra entana ary fanondranana entana, manana ekipa fitantanana kilasy voalohany ary manana zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina mahaleo tena. Nametraka tongotra izahay amin'ny famokarana milina, sakafo, fananganana, lozisialy, indostria simika, angovo ary ny hafa hanome vahaolana fiarovana ho an'ny orinasa. Ny vokatra Lockey dia mandrakotra ny fanidiana azo antoka, ao anatin'izany ny kitapo fiarovana, fanidiana valizy, valizy fanidiana, fanidiana herinaratra, fanidiana tariby, boaty fanidiana vondrona, kitapo sy fiantsonana sns.
Mihaona amin'ny fenitra toy ny ISO9001, OSHA, OHSAS18001, ATEX, sns ny famokarana ataonay.